Xildhibaano diyaarinaya Mooshin muddo kororsi loogu sameynayo Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaano diyaarinaya Mooshin muddo kororsi loogu sameynayo Farmaajo
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa doonayo inuu muddo kororsi Labo Sano ah ku dhawaaqo, taasoo la aaminsanyahay in ay gadaal ka riixeyso Villa Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sidii ay dalka ku gaarsiin lahaayeen doorasho qof iyo cod ah oo haatan diyaar garowgeeda uusan muuqan.
Xildhibaanada oo aan tiradoodu si rasmi ah loo heynin, hase yeeshee lagu sheegay in ay Kontomeeyo gaarayaan ayaa shir jaraa'id ay qabteen ku sheegay in ay bad baadinayaan masiirka Ummadda Soomaaliyeed, kana shaqeynayaan sidii ay dalka doorasho qof iyo cod ah ku gaarsiin lahaayeen.
Dhinaca kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xildhibaano katirsan Baarlamaanka ay diyaarinayaan Mooshin ay ku dalbanayaan labo sano oo muddo kororsi ah oo ay xukuumadda cusub dalka ku gaarsiineyso doorasho qof iyo cod ah.
Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo kamid ah Gollaha Wasiirada ee la riday ayaa haatan ku soo biirtay garabka taageersan Farmaajo, iyadoo kasoo muuqatay mudanayaasha hor boodayo abaabulka Mooshinkaan muddo kororsi lagu raadinayo.
Wararka ayaa sheegaya in qorista Mooshinka uu haatan socdo, islamarkaana Baarlamaanka ku dhawaaqi doono muddo kororsi labo sano ah ka hor 15-ka Agoosto oo la filayo in uu dhaco wajiga 3aad ee shirka Dhuusamareeb, kaasoo laga dhur sugayo in la cadeeyo nooca doorasho ee ka dhici karta dalka.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dedaal kasto ku bixineysa sidii ay muddo kororsi ugu qancin lahayd dhinacyada kasoo horjeedo, iyadoo waddo kasto oo suurta-gal ah ay u mareyso, waxaana arintaan darteed lagu kala diray Xukuumaddii RW Kheyre.
Comments Topics: farmaajo gollaha shacabka kheyre muddo-korarsi mudo-korarsi villa soomaaliya